Itoophiyaa: MM Abiy daangaa amantii fi mootummaa jidduu jiru ce'anii? - BBC News Afaan Oromoo
Ministirri Mummee Abiy Ahimad yeroo kabaja ayyaanota amantii garaagaraa ergaawwan hawwii gaarii barreeffamaan dabarsaniifi haasaawwan qabiyyee amantii qaban yoo taasisan mul'ata.
Namootni lakkoofsi isaanii muraasa hin jedhamne gocha MM Abiy kana wayita qeeqan ni dhagaahama.
Torbee darbe barreefama kadhataa Afaan Amaaraa fi Ingiliziin katabame kan koomishinii nageenyaafi araaraan qophaa'ee fuula 'twitter' isaanii irratti maxxansanii turan.
Maxxansi 'twitter' MM Abiy kun yaada hedduu keessummeessee jira.
Fayyadamtoonni 'twitter' gariin ''mootummaan dhimma amantii keessa galuu hin qabuu yoo jedhan, gariin ammoo akka gaariitti simatanii 'Amen' jechuun barreefama kadhannaa kanaaf deebii kennanii jiru.
Ergaawwan qabiyyee amantaa of keessaa qaban MM Abiy maxxansan qajeelfama mootummaan dhimma amantii keessa hin seeniin jedhu ni faallessaa?
Heerri biyyattii mootummaa fi amantii adda adda jedhee kan murteesseef ''amantii hundumaa wal-qixa ilaaluun waan cimuuf keessaa harka fudhachuutu barbaachisaa gatii taheefi,'' jedha Waashingitan, Yuunivarsiitiu Liitti barsiisaa seeraa kan ta'e Dr Henook Gabbisaa.
Dubartii mirga dhaalaa seera shari'aan kaa'ame falmitee mo'atte
Otoodhuma uummanni biyya kanaa %100 amantoota tahanillee heerri biyyattii mootummaan amantii waliin hariiroo hin qabu jedhee lafa kaa'eera jedhu Dr Henook.
Shoorri mootummaa mirgi amantii kamiyyuu gaafa sarbamu eeguu dha, kuni immoo nama amanuufi kan hin amanne dabalata jedhan.
''Ministirri mummee takkaa akka sheekii, paastariifi qeesiitti tahuun marsariiti hawaasaa irratti waan barreessan dogoggora, kaadhata midiiyaa hawaasumma irratti barreessuun itti gaafatamummaa warra amantiiti malee kan isaanii miti,'' jedhu.
'Ergaa siyaasaa qola amantiin...'
Yunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa gaazexeessummaa fi koominikeeshinii kan tahan Dr Teshaagar Shifarraaw garuu yaada addaa qabu.
''Ergaawwan ministirri muummee yeroo ayyaanotaa dabarsan, irra keessaan yoo ilaalamu kan amantii haa fakkatuyyuu malee, kaayyoon isaa inni guddaa hordoftoota amantii sanaaf ergaa siyaasaa dhaamuudha,'' jedhu.
Fakkeenyaaf, yeroo ayyaana Faasikaa, ''du'aa ka'uun gidiraa boodadha, gidiraa dura du'aa ka'uun hin jiru'' kan jedhu ergaa siyaasaa of keessaa qaba jedhu.
Kana jechuun injifannoon dura ifaajaa fi dadhabbii baayyee barbaada waan jedhu dhaamuuf kan akeekee fakkaata jedhan.
MM Abiy akkasuma taateewwan Quraana keessatti caafaman tuquun ergaa wayita dabarsan ni argina jedhu Dr Tashaagar.
''Barreeffamni yookiin haasaan kaayyoon isaanii ijoo ergaa hawaasummaa fi siyaasaa dhaamuuf katabaman yookiin dubbataman, mootummaan kallattiin amantii waliin wal-qabachuu ykn amantii keessa seenuu agarsiisa jedhee hin yaadu,'' jedhu.
Haasaawwanii fi barreeffamootni qabiyyee amantii of keessaa qaban mootummaan dhimma amantii keessa seeneera jechisiisuuf qorannoo gaafata jedhu.
Haa ta'u male hogganoonni mootummaa karaa dhokataa fi ifa taheen ergaawwan isaanii bifa amantii akka qabaatan gochuun sirrii mitis jedhu.
Qaamoleen mootummaa gama madaalawaa taheen amantiiwwan hundaaf ergaa keenya ni dabarsina jechuunillee sirrii mitii sababiinsaa isa gochuudhaaf dhaabbileen amantii jiru jedhan.
''Ministirri mummee haasaa isaanii keessatti irra deddeebiin maqaa uumaa yeroo kaasan ni dhagaahama, hanga maqaa Waaqa amantii tokkoo addatti hin waamnetti irratti walii galuu dandeenya taha,'' jedhan Dr Tashaagar.
Sababiinsaa "akka waan amantii hin qabneetti of dhiyeessuunis faayidaa qabaachuu dhiisuu danda'a" jedhan.
"Kanaaf, haasaa adda adda akeeka itti jedhameef sana ilaaluu qabna, waan jedhame sanaaf kan wal simudha jennee amannaan itti fayyadamuun rakkoo hin qabu" jedhan.
Haa tahu malee, ''afaan ykn haasaan qaama mootummaan taasifamu imaammataan hogganamuu akkasumas sirnaafi naamusa dubbii qabaachuu qaba'' jedhan.
Mootummaan sirna biyya lafaan hogganamu haala yeroo fi bu'aa qabeessummaaf jecha amantii fayyadamuun falmisiisuufi gaaffii kaasisuu ni mala jedhu.
Ergaawwan aanga'oonni mootummaa olaanoo marsaalee hawaasaa irratti dabarsan kan dhunfaa isaaniiti, waan ta'eefis rakkoo hin qabu kan jedhan jiru.
Dr Tashaagar garuu, namootni itti gaafatamummaa olaanaa qabatanii jiran dubbiin isaan miidiyaa hawaasummaa dhuunfaa isaanii irratti barreessan kan dhuunfaa isaaniiti jedhamu hin danda'u jedhu.
Sababiin isaa jarreen kun bakka bu'oota uummataati waan isaan dhaamaniifi dubbatan itti gaafatamummaa fudhataniin hiikama jedhan.
Haasaa fi barreefamni isaanii illee kan uummataati jechuudha jedhu.
Hospitaala Royaal Darbii: Hijaaba qulqulluu takkaa qofa fayyadee gatamu hojiirra oole
Dubartii Masrii mirga dhaalaa seera shari'aan kaa'ame falmitee mo'atte